यी ६ अभिनेत्रीले हिरोलाई छोडेर भिलेनलाई गरे विवाह! – News Nepali Dainik
यी ६ अभिनेत्रीले हिरोलाई छोडेर भिलेनलाई गरे विवाह!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: १८:१६:५४
फिल्म इंडस्ट्रीमा तपाईले थुप्रै अभिनेत्री देख्नुभएको होला, जसले बलिउड हिरोसँग बिहे गरेका छन्। र यो निकै नै सामान्य कुरा हो । साथै केहि अभिनेत्रीहरु यस्ता रहेका छन जसले जीवनसाथीको रूपमा कुनै ठुलो बिजनेसम्यान वा क्रिकेटर रोजे । तर आज हामी तपाईलाई ति अभिनेत्रीको बारेमा बताउछौ जसको मन खलनायकमा गयो ।
‘हम आपके हैं कौन’ बाट लोकप्रिय भएकी अभिनेत्री रेणुका शहाणेलाई त कैयौं थुप्रै फिल्ममा देखिसकेका छौ। उनले २०१० सालमा आशुतोष राणासँग बिहे गरेकी थिइन्। उनको दुई सौर्यमान राणा र छोरा सत्येन्द्र राना रहेका छन् । आशुतोष राणा बलिउडमा भिलेनको रोल निभाएको कारण चर्चित छन्। उनले ‘दुश्मन’, ‘संघर्ष’, ‘बादल’ जस्ता फिल्ममा भिलेनको रोल निभाएका छन्।
१९९३ मा मिस इंडियाको ताज हासिल गरेकी पूजा बत्राले २०१९ मा नवाब शाहसँग बिहे गरेकी थिइन्। नवाबले ‘टाइगर जिंदा है’, ‘डन २ ’ सहित साउथको कैयौँ फिल्ममा खलनायकको भूमिका निभाएका थिए। उनीसंग पूजाको दोस्रो बिहे हो । यो भन्दा पहिला उनले सोनू एस अहलूवालियासँग डिभोर्स गरेकी थिइन्।
पोनी वर्मा बलिउडको चर्चित कोरियोग्राफर मानिन्छ। उनको २०१० सालमा प्रकाश राजसँग बिहे भएको थियो। प्रकाश बलिउड फिल्मको ब्रांडेड भिलेन रहेका छन्। उनलाई ‘सिंघम’, ‘वांटेड’, ‘दबंग २ ’ जस्ता कैयौँ हिट फिल्ममा देख्न सक्छौ। फिल्ममा खलनायकको रोलमा देखिसकेका छन्।
टिभी र फिल्म दुवै ठाउँमा काम गरिसकेकी अभिनेत्री निवेदिता भट्टाचार्यले बलिउड अभिनेता के के मेननअङ्ग बिहे गरेकी थिइन्। के के मेनन पनि बलिउडको कैयौँ फिल्ममा खलनायक बनिसकेका छन्।
कृतिका सेंगर टिभीको चर्चित अभिनेत्री हुन्। उनलाई ‘रानी लक्ष्मीबाई’ र ‘कसम तेरे प्यार की’ जस्ता पपुलर शोजमा देखिसकेका छौ। उनले २०१४ सालमा डायरेक्टर पंकज धीरको छोरा निकितन धीरसँग बिहे गरेकी थिइन्। निकितन धीरलाई हामी सबै ‘मिशन इस्ताम्बुल’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘दबंग २ ’ र ‘रेडी’ सहित कैयौँ फिल्ममा खलनायकको भूमिका निभाएको देख्न सक्छौ ।
शिवांगी कोल्हापुरी ७० र ८० की अभिनेत्री हुन्। यसैक्रममा उनको मन बलिउडको चर्चित भिलेन शक्ति कपूरमाथि गएको थियो। यी दुईले १९८२ मा भागेर बिहे गरेका थिए । वास्तवमा शिवांगीको घरबाट यस बिहेको लागी राजी थिएनन्। कारण शक्तिको बलिउडमा बनेको ईमेजको कारण थियो। शक्ति कैयौँ फिल्ममा भिलेन रहेका थिए। अनस्क्रीन कोहि हीरो होस् वा खलनायक यस कुराबाट केहि फरक पर्दैन। यो कुराले फरक पर्छ कि व्यक्ति रियल लाइफमा कस्तो मानिस हुन्।
Last Updated on: February 25th, 2021 at 7:15 pm